Etu esi eji ntutu ntutu isi ma ọ bụrụ na ị na-eji mgbatị ntutu ọdịnala, nke a bụ ihe ị ga-eme. 1. Jidere akụkụ nke ntutu. Mepụta ngalaba nke ntutu iji gbanye ya. Nta-nta nke ngalaba, tighter the curl. Ibu nkebi ahụ, tọọtọ curl ahụ. 2. Ọnọdụ gị curling ígwè. Mepee mwekota nke ir ...
Ojiji • Emetụla ngwa eletrik aka mgbe mmiri dị na ụkwụ ya. • Yiri akpụkpọ ụkwụ rọba ma ọ bụ plastik mgbe ị na-eji akụrụngwa eletriki, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-azọ ụkwụ n’elu ụlọ nakwa mgbe ị na-anọghị n’èzí. • Ejila ngwa ọrụ mebiri emebi ma ọ bụ ihe merela agadi eme ihe n'ihi na nke a nwere ike ...
Ulo oru ndi China na ndi edozi isi abanyela na ulo oru ndi ozo di iche iche, tinyere ndi edozi isi, ndi mara mma nke oma, ndi ogwu, ndi nkuzi na ndi nkuzi, ntaneti na ntaneti na ndi ozo di iche. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2019, ọnụ ọgụgụ nke China '...